ရှေ့နေ ကောင်းကင် ရဲ့ အစိမ်းရောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ရှေ့နေ ကောင်းကင် ရဲ့ အစိမ်းရောင်	27
ရှေ့နေ ကောင်းကင် ရဲ့ အစိမ်းရောင်
Posted by မြစပဲရိုး on May 19, 2015 in Photography, Short Story | 27 comments
ဘာခေါင်းစဉ် ကြီး လဲ ဆိုပြီး ဝင်လာကြတယ်လား။ :-)))
အလျှောက်ကောင်း တဲ့ ရှေ့နေနို ကို ပုံလေး တစ်ပုံပြချင် လို့ တင်လိုက်ပါတယ်။
ဒီ သတင်းလေး ကို ဖတ်ပြီးပြီချင်း သဘောကျလွန်းလို့ ဖဘ ထဲ မှာတောင် မျှခဲ့ဘူးတာပါ။
လေယာဉ်မှူးကြီး က သူ့ရဲ့ လက်ထောက် Co-pilot က သူ့သမီး ပါလို့ ဂုဏ်ယူစွာကြေငြာ ခဲ့တဲ့ လေယာဉ် ခရီးစဉ် ရဲ့ သတင်းလေးပါ။
သူတို့ပုံလေးကလဲ အလုပ်ထဲ မှာပါဘဲ။
ဒါပေမဲ့ မျက်နှာ ပုံစံ ကို ကြည့်ပါ။
အဲဒီ သားအဖ အတွက် သူတို့ အမေ ဘယ်လောက် ဂုဏ်ယူလိုက်လေမလဲ မှန်းကြည့်မိသေး။
နောက်ပြီး ကလေး တွေ နဲ့ ခရီးသွားတိုင်း “မရောက်သေးဘူးလား” မေးကြတာ ကို သတိရပြီး
အဲဒီ ကလေးမ လေးကလဲ သူ့ အဖေကို “Are we there yet? ” လို့ နောက်ပြီး မေးနေမလား တွေးပြီး ပြုံးမိခဲ့တဲ့ ပုံလေးပါ။
He inspired his daughter Laura to join and learn to fly herself in 2009 She flew Airbus and her father Boeings so working together was unlikely
Fluke in the roster meant father and daughter shared cockpit this month Mr Elliott made announcement to passengers that it wasaspecial flight He told those travelling to Tenerife he was flying with his daughter After 30 years asapilot, Captain Peter Elliott got to fly withaco-pilot he knew more than most.
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2956983/Father-59-30-year-old-daughter-finally-fly-pilots-Thomas-Cook-flight-Tenerife.html#ixzz3aWWTtFOd
ရှင်တို့ ရဲ့ ခေးမလေး ကိုလဲ လေယာဉ်မောင်းနေချိန် ဓာတ်ပုံရိုက် တာ ကို မပြောပါဘူး။
သူ့ရဲ့ မျက်နှာပေး ကို ဝေဖန်ခဲ့တာပါ။
အပြင် အဝတ်အစား နဲ့ ဘယ်လို ပုံစံ ရိုက်ရိုက်၊ ဘယ်လောက်ဘဲ public ကို ထုတ်ပြပြ အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။
ပေါ့ဆဆ ကလူသလို မြူသလို လုပ်တတ်တဲ့ စရိုက်မျိုး ကို မိန်းကလေး တစ်ယောက် ပညာရှင် အဆင့် ယူနီဖောင်းဝတ် ထားချိန်မှာ မလုပ်သင့်ဘူး။
ပညာရှင် မိန်းကလေး တစ်ယောက် ကို တည်တည်ကြည်ကြည် မျက်နှာလေး နဲ့ တင့်တယ်စေလိုပါတယ်။
တကယ်တော့ အဲဒီလို ယူနီဖောင်းဝတ် Good looking powerful woman ပုံစံ ဖြစ်ဖို့ မျက်နှာ က တင်း နေသင့်တယ်။ အဲဒါက ဆွဲဆောင်မှု ပိုပြီးရှိပါတယ်။ :-)))
ဒီလို ယောကျာင်္းတွေ နဲ့ ရင်ဘောင်တန်း နိုင်တဲ့ အလုပ်ကို ကြိုးစားပြီး လုပ်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း ကို ချစ်လဲချစ်တယ်၊ လေးစားလဲ လေးစားတယ်။ အားလဲပေးတယ်။ ချီးလဲချီးကျူးတယ်။ အားလဲကျပါတယ်။
ဒီ အရီး က ဆရာမ အဖြစ်ကျင်လည်ခဲ့ဘူး တော့ ကလေး တွေ ကို ဟန်ကျ ပန်ကျ ဖြစ်စေချင်လွန်းလို့ အားမရတဲ့ အခါ နဲနဲ တွန်း တတ်တဲ့ အကျင့် က ပါနေလို့ ပြောမိတာပါ ရှေ့နေကြီး ရယ်။
အသေအချာရှင်းပြ ပြီး ရှေ့နေလိုက် ပေးထားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီ ဓာတ်ပုံလေး က အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပါ။ တစ်နေ့ ကျ နမူနာ ဖြစ်နိုင်မလားလို့။ :-)))
ရှေ့နေဇာတ်လမ်း နဲ့ ဒါ့ပုံ ပြီးတော့ ကောင်းကင်လေး ရဲ့ အစိမ်းရောင် ဇာတ်လမ်း ဆက်ပါ့မယ်။
. ရွှေတိဂုံကိုကယ်ဖို့စာ တွေ ဖတ်နေရင်း ဒီလောက် မြေကြီးပေါတဲ့ ရာသီကောင်းတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ပူအိုက်လွန်းလှတာ ကောင်းကင်ထောက်ပြသလို သစ်ပင်တွေ ရှားကုန် လို့ပါဘဲ။
အရင်က အရီး တို့ လမ်းထဲ အိမ်တွေတိုင်း နီးပါး အရှေ့ နဲ့ အနောက် ရှိတဲ့ မြေလေးတွေ ပေါ်မှာ သစ်ပင်ကြီး တွေ ရှိတယ်။
သရက်၊ ပိန္နဲ၊ မန်ကျည်း၊ ဒန့်ဒလွန်၊ မာလကာ သနပ်ခါးပင်၊ ဇီဇဝါပင် အစုံပါဘဲ။
၈၈ နောက်ပိုင်း တိုင်းပြည်ကြီး ကို ကယ်တင်ခံလိုက်ရပြီး နောက် အဲဒီ တစ်ချို့အပင် တွေ အခုတ်ခံရတယ်။ တစ်ချို့ ကတော့ အိမ်ပြင်ဆောက်ရင်း ခုတ်လိုက်ကြတယ်။
အစိုးရ ရဲ့ သစ်ပင်ခုတ် ရင် ထောင် ၃နှစ် ဆိုတာ က သစ်ပင်တွေ ပြုန်းမှာထက် သူခိုး လက်က သူဝှက်လု မှာကြောက်လို့။
ဒါနဲ့ဘဲ မြန်မာပြည် ထဲ အစိမ်းရောင် တစ်မျိုး ကြီးစိုးလိုက်တာ တစ်ခြား အစိမ်းရောင် တွေ ပျောက်ရော။ (ကျောက်စိမ်း ဆိုတာလဲ ပြောင်ပြီ ထင်ရဲ့)
. နောက် အရီးလဲ စိန်ပန်းကို ကြိုက်တယ်။
အထက်တန်းကျောင်းမှာတုန်းက ကျောင်းရှေ့ ပါတ်ပါတ်လည် စိန်ပန်း နီ တွေ၊ ကျောင်းထဲ မှာ အဝါ တွေ၊ တစ်အားလှတယ်။
စိန်ပန်း အပွင့်မှာ အထပ်လေး ကို ခွါပြီး လက်သဲအတု လုပ်ပြီး ကစားကြတယ်။
. နွေကျောင်းပိတ်ချိန် နီးရင် စိန်ပန်း ပွင့် နီနီ တွေ မြေမှာ ပြန့်နေပြီ။ တစ်အားလှတယ်။
သူကြီးမင်း က “ငု” ကို အမျိုးသားပန်း လို့ ရွေးထား တော့ အရီးကတော့ စိန်ပန်း ကို ကို နိုင်ငံ ရဲ့ အမျိုးသမီးပန်း အဖြစ်ထားချင်တယ်။
အောက်မှာ ပုံလေး တွေ က သူများမြေ က အင်မတန်အေးချမ်းတဲ့ အစိမ်းရောင် မြင်ကွင်း တွေပါ။
အရီးတို့ အိမ်နောက်မှာလဲ အပင်ကြီး တွေ ရှိတယ်။
အပင်အသစ် လေး တွေလဲ အများကြီး စိုက်ထားတယ်။
အစိမ်းရောင် ကို ကြိုက်တဲ့ ကြောင်
အိမ်နားက အစိမ်းရောင်များ – Ash (Fraxinus excelsior) – British tree လို့ ခေါ်တဲ့ အပင် တွေ
Ash အပင် ရဲ့ အရွက် နဲ့ ရော နေတဲ့ အပွင့်
အလုပ်သွားတဲ့လမ်း က အစိမ်းရောင်များ – acorn, or chestnut trees တောက်လျှောက် အဲဒီ အပင်တန်းကြီး ခရေပင်လမ်း လိုဘဲ
အလုပ်သွားတဲ့လမ်း က အစိမ်းရောင်များ
အလုပ် နားက အစိမ်းရောင်များ
ခင်ဇော် says: ဟွာလေ. ပိုင်းးလော့ လို့ စာရိုက်ရှာတိုင်းး ပိုင်းလော့ ဆရာတော် FB ပေ့ခ်ျတွေပဲ ကျကျလာလို့ လက်အုပ်လေးးချီချီပြီးး ပြန်ပြန် ပိတ်ရတယ် …
kai says: အပေါ်ကလင့်က မြင်မရလို့… ဖြည့်/ရှာထည့်လိုက်ကြောင်း..
မေပြည့်စုံအောင်က… ဦးရဲထွဋ်သမီးဆိုတာ.. ဟုတ်ရဲ့လား..။
ခင်ဇော် says: I don’t think so.
ခင်ဇော် says: ဒါလေးးက လည်းး အသန့်အဗပြာင်လေးး
pooch says: ဟယ် ဒီတယောက်ကမဆိုးဘူးနော် တောင်ကြီးကဆိုပါလား စိုင်းစိုင်းတို့နဲ့ ရပ်ဆွေရပ်မျိုးတွေပေါ့ အားပေးရမှာပေါ့လေ
ကိုယ်တွေကလည်း သန်ရာသန်ရာပေါ့ Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ဒီ ကြားထဲ ဟာသညာဏ်လေးက ရှိသေးးးး
အောင် မိုးသူ says: အောင်မလေးလေး……..လေယာဉ်မောင်းရင်း ဆဖီးရိုက်နေတာလားငင်။ တားက လေယာဉ်ဆို စီးရတာ သိပ်ကြောက်တာ။ :O
Kaung Kin Pyar says: မေပြည့်စုံအောင်ကတော့ အခုအရမ်း Hot နေတာပါ….။ ငယ်ရုပ်လေးနဲ့ဆိုတော့ ဘယ်လိုလေးဖြစ်ဖြစ် ကြည့်လို့ကောင်းနေတာပဲလေ…။ မျက်နှာကတော့ သိပ်မထူးခြားပေမယ့် ဘော်ဒီကတော့ ကိုကိုများ ခိုက်ချင်စရာ..(Slim များသာ လိုလားသူများကို ဆိုလိုပါတယ်.)
ဒီအသက်လေးနဲ့ လေယာဉ်မောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာ နည်းတဲ့ဂုဏ်ယူစရာမှ မဟုတ်ပဲလေ…။ အဖက်ဖက်က ပြည့်စုံနေပါမှ…။
သို့သော် အရီးပြောသလိုပဲ…ယူနီဖောင်းလေးနဲ့မယ်တော့ ခပ်မာမာ ခပ်ထက်ထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကွန်ဖီးဒန့်နေပုံလေးဆိုရင်တော့ ပိုပြည့်စုံသွားမယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။ ပုံကိုမြင်မြင်ချင်း ဒီအတွေးတွေးမိပါရဲ့……။ ချပြချင်ပေမယ့် လူငယ်ချင်းလဲဖြစ်လေတော့ မတော်ကိုယ့်ကို ဂျေကိုက်သလို အေကိုက်သလိုတွေ ဟိုဟိုဒီဒီတွေးပြီး နှုတ်လှန်ထိုးကြမယ့် ကိုကိုတွေရဲ့ မေတ္တာပို့ကော်မန့်တွေကို စိတ်ရှုပ်တာနဲ့ လက်ရှောင်ခဲ့တာ…
ကြုံတုန်း ဒီပိုစ့်မှာရော ဟိုရခိုင်မင်းသားလေးပါတဲ့ ပိုစ့်မှာပါ အရီးနဲ့ အဂရီးပါလို့ ပြောဗျဇီ….
အစိမ်းရောင်တွေကတော့ ငယ်ငယ်က မြေပေါပြီး သစ်တောတွေ စိမ်းနေတဲ့ တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာ နေခဲ့ရလို့ထင့်…။ အဲ့က ရှုလိုက်ရတဲ့ လေတိုင်း လတ်ဆတ်နေတာတွေကို ရန်ကုန်မှာ ပြန်မရတော့ နှမြောမိတယ်…။ မချွိပြောသလို လူတွေက စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်နေရတာလဲ ပါပါလိမ့်မယ်….။ စိုက်စရာ မြို့လယ်ခေါင်မယ် မြေရှားတာလဲ ပါပါလိမ့်မယ်…။ တော်ရုံဝါသနာနဲ့တော့ တိုက်ခန်းဝရံတာပေါ် အိုးကြီးအိုးငယ်တင်ပြီး မစိုက်ဖြစ်ကြတော့လေ…
ကောင်းကင်ရဲ့ အမေကိုယ်တိုင်က အပင်စိုက် အရမ်း ၀ါသနာပါတာ…။ ကိုယ်တိုင်သာ မစိုက်ပါဘူး ဘာညာ ဂျစ်နေပေမယ့် … အပင်တွေကို ချစ်တဲ့ အမေ့သွေးတော့ ပါတယ် ထင်ပါတယ်…
၅ တန်းနှစ်က စိုက်ခဲ့တဲ့ ကုက္ကိုလ်ပင်လေး ဂရုစိုက်နေတဲ့ကြားက သေသွားတော့ စိတ်မကောင်း…။ ငါ့လက်က အပင်စိုက်ရင် ရှင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ ခပ်ကြောင်ကြောင်လဲ တွေးမိတာနဲ့….
အဓိကက သံယောဇဉ်သိပ်မထား စိတ်သိပ်နှစ်မထားဘဲ .. ကိုယ့်စိတ်သက်သာအောင်နေတတ်ရင် အဆင်ပြေသွားမယ့် ကိစ္စပါ
ခုတော့ အိမ်မယ် သရက်ပင်ပေါက်လေးတွေ ၀ယ်ထားတယ်…နီးစပ်ရာလူတွေကိုလဲ လက်ဆောင်ပေးမလားလို့ရယ်…။
သူတို့ကို အကောင်းဆုံးတော့ ဂရုစိုက်လိုက်ပါ့မယ်…ရှင်တာမရှင်တာတော့ သူတို့အပိုင်းပေါ့လေ…
Alinsett @ Maung Thura says: အရောင်တကာ့ အရောင်ထဲမှာ .. ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးအရောင်က အစိမ်းပါ….
sorrow says: စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနဲ့ ယှဉ်လိုယှဉ် …30 year old Co-pilot ကြီးနဲ့ယှဉ် …ဟိုကကလေးပဲရှိသေးတာကို …ဘာပဲပြောပြော …ဘယ်လိုပဲအချက်အလက်နဲ့ သက်သေပြပြ … အရီးမှားတယ်..ကောင်းကင်ပြာလေးလဲမှားတယ်… အသဲလေးပဲ မှန်တယ်… အငိငိငိ
weiwei says: ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်မှာ ရန်ကုန်မြို့ကလွဲရင် အစိမ်းရောင်တွေ အများကြီး တွေ့ရပါတယ် .. နွေခေါင်ခေါင်အချိန်တောင်မှ အညာမြေက စိမ်းနေတာ …
nozomi says: ကျနော်က ရှေ့နေ ပါ မေ … ( အဟိ )
ရွှေပြည်ကြီး မှာ လဲ အဖေ ကတ်ပီတန် သမီး အက်ဖ်အို နှစ်တွဲတောင် ရှိပါ့
အဖေ ကတ်ပီတန် သား အက်ဖက်အို ၊ အဖေ ကတ်ပီတန် သား ကတ်ပီတန် တွေ ဆို များ မှ များ ခေး လေး ကိစ္စ ကတော့ ကိုဆောရိုး ကြီး ပဲ လွှဲ လိုက် တော့ မယ်
lu lu says: လေယာဉ်မယ်လားးး
Mike says: .ရွှေပြည်ကြီးမှာတော့ တောင်ပေါ်ရောမြေပြန့်ပါ အစိမ်းရောင်ရှားနေပါပြီ
.တနှစ်က ရခိုင်ရိုးမပေါ်ရောက်ခဲ့တာ မြင်မြင်သမျှ တောင်ကတုံးချည်းပဲ…အဖတ်ဆယ်မရတော့ပြီ
တောင်ပေါ်သား says: အစိမ်းရောင်တွေကြား မွေးဖွားခဲ့တဲ့ တောင်ပေါ်သားပါ
ဒါပေမယ့် အခုတော့လည်း ဇာတိမြေမှာ အညိုရောင် တောင်ကတုံးနဲ့ ဧရာမြစ်ရေ ရွှံ့ဝါရောင်တို့ပဲ ရှိပါတော့တယ် ၊
စဂါးမစပ် လိန်ဗျံမှူးမလေးက အနော်နဲ့ ပတ်သက်ဘူးနော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 138
​ဒေါ် လေး says: ကျွန်မ နေခဲ့တဲ့ အထက်တန်းကျောင်းမှာလဲ စိန်ပန်းနီနီတွေ ပွင့်ရင်
တအားလှ ကြွေကျလာတဲ့အပွင့်က ပွင့်ဖတ်အောက်နားက
ဘာခေါ်လဲတော့မသိ လက်သည်းရှည်ပုံလေးကို ကိုယ့်လက်သည်းမှာကပ်ပြီး
လက်သည်း အတု လုပ်ကစားကြတာ
သူများနိုင်ငံမှာက စိမ်စိမ်းစိုစို ဖြစ်အောင် တမင်ဖန်တီးယူတယ်
ဒီမှာတော့ လမ်းတွေ မှာတောင် ခိုနားစရာ အပင်မရှိတော့ဘူး
ဒီနှစ်နွေက တအားပူတော့ ပိုဆိုး ဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်ရမလဲ
အစိုးရကိုလား လမ်းကန်ထရိုက် ခရိုနီကိုလား သစ်တွေခုတ်ရောင်းပြီး
ဘွဲ့ရှည်ရှည် တွေရနေတဲ့ ဟိုလူကြီးလား
မြစပဲရိုး says: အားလုံးဘဲ ကျေးဇူးပါနော်။
အခုတော့ အဲဒီ ခေးကို ကိုယ်ပါ သနားလာမိပြီ။
နောက်ဆို လေယာဉ်ပေါ် ဆဲလ် မဖီ တော့ပါဘူးတဲ့။
မိန်းကလေး ကြည့်ရတာ လိမ္မာပုံတော့ရသား။
ဒါထက် ဟို တစ်ကောင် မောင်မောင်စော တော့ ဖြူဖွေးလက်ချက် နဲ့ နာချင်ပြီနဲ့တူတယ်။
Foreign Resident says: မြစပဲရိုး says:
” နောက်ဆို လေယာဉ်ပေါ် ဆဲလ် မဖီ တော့ပါဘူးတဲ့။
မိန်းကလေး ကြည့်ရတာ လိမ္မာပုံတော့ရသား ”
့ဘေးလူတွေပြောရုံနှင့် ကိုယ့်စရိုက် ( လုပ်ပုံ ကိုင်ပုံ တွေ ) ကို ၊
လွယ်လွယ် လိုက်ပြောင်းတဲ့သူတွေကို အထင်အမြင်သေးတယ် ။
ဘာ ခံယူချက် အတွေးအခေါ် မှ မရှိတဲ့ ဖွတ်ကျား လို့ ထင်တယ် ။
သူ့ လေယာဉ် အသေးတော့ မသိဘူး ၊
့လေယာဉ် အကြီးတွေမှာတော့ Auto Pilot နှင့် မေါင်းကြတယ် ။
အဲလို Auto Pilot နှင့် မေါင်းတဲ့အချိန် ဆဲလ်ဖီ လို့ ရပါတယ် ။
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဆဲလ်ဖီ တာ ဘယ်သူ့မှေ–ာက်ဂရုစိုက်စရာ မလိုပေါင် ။
မြစပဲရိုး says: မှတ်ချက်လေးကို စိမ်း လိုက်ပါတယ် အဘဖော။
. အကြိုက်ဆုံး မို့တော့ မဟုတ်။ အဖြေသင့် ဆုံး စကား တစ်ခု ဖြစ်အောင် ဖန်တီး ထားလို့ပါ။ lol:-)))
ဒီ ပို့စ် က “ပရို” ဆိုတာရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပါ။ အဲဒီထဲ မောင်ဇော်သန့် ရဲ့ စာ ကို ဇီဇီ ပေးထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီ ခေးလေး က ပရို အထိ မဟုတ်သေး လို့ တောင် အားနာသွားရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကို ထပ်ရရင် လေပေါ်မှာ နာရီ ကို ငွေ နဲ့ဆက်ပြီး သင်နေရတာ ကို ထားဦး လူပေါင်းများစွာ ရဲ့ အသက် ကိုယ့်လက်ထဲ မှာ တာဝန်ယူရမဲ့ ပညာ ကိုသင်ကြား နေရချိန်မှာ စက္ကန့် ပိုင်းလေးတောင် အာရုံ မပျက်သင့်ဘူး။
နောက်အရေးကြီး ဆုံး တစ်ချက် က ပရို ဖြစ်လာချိန် သက်ဆိုင်ရာ Professional ethics ကို လိုက်နာရဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။
အဲဒီ Professional ethics ကို ဖောက်ဖျက်ရင် တရားဥပဒေ အရတော့ အရေးမယူနိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်း အတွက် အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။
အဲဒီ အထဲမှာ – ကိုယ့် ရဲ့ အလုပ်နဲ့ နွယ် တဲ့ အပြုအမူ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခု ကို တစ်ခြားပြင်ပလူ တွေ က သံသယဖြစ်နိုင်ရင်ဘဲ အဲဒီ အပြုအမူ ကို မှန်ရင်တောင် ရပ် လိုက်ရပါမယ်။
ကိုယ်က မရပ်နိုင်ရင်တော့ အဲဒီ လုပ်ဆောင်ချက် ကို မလုပ်ဖို့ပါဘဲ။
အဲဒါ ပရို အလုပ်တိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။
အဘ လဲ ပရို တစ်ယောက်ဘဲ ကိုယ့် အောက် က cadet လေး က စာသင်နေချိန် ဆဲလ်ဖီ နေယျာဉ် စာမှာ အာရုံ မပျက်ပါဘူး လေလို့ ခွင့်လွှတ် မယ် ဆိုလဲ လွှတ်ပါ။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ ရွှေပြည်ကြီး ထဲ ပရို အများစုက Professional ethics ကို လုံးဝ ဂရု စိုက်ဘဲ ငါတို့ ဟာ ငါတို့ လုပ်တာ ဘယ်သူ့ ကိုေ-ာက်ဂရုစိုက်ရမလဲ တွေ များလာ နေလို့ ပြည်ပျက် နေလို့ များ မထင်မိ ဘူးလား အဘဖော ရေ။
မှတ်ချက်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါရှင့်။
Foreign Resident says: Professional ethics မှာ ဆဲလ်ဖီ မရိုက်ရလို့မှ မပါတာ ။
တကယ့်ကို ခက်ခဲပြီး အန္တရာယ်များတဲ့ ၊
တိုက်လေယာဉ်မှူးတွေတောင် ရိုက်နေတာဘဲလေ ။
ကျနော်သာ သူ့ အထက် အရာရှိ / Trainer ဆိုရင် ၊
As Long As သူ့ လေယာဉ် နှင့် ပါတဲ့လူတွေ ကို အန္တရာယ် မဖြစ်စေသရွေ့ ၊
ဘာ တစ်ခုမှ မ ကန့်ကွက်ဘူး ။
တကယ့် တကယ်က ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့် ကို မရှိတာ ။
ဦးကျောက်ခဲ says: ဆဲလ်ဖီဆိုလို့ လွန်ခဲ့သော ၃-နှစ်ကျော်က Cathy Pacific မှာ…
လေယာဉ်မောင်းခန်းထဲ လေယာဉ်မှူးနဲ့ စပါယ်ယာ ဒချိနေတဲ့ပုံထွက်လာလို့…
အကြီးအကျယ် ကွိုင်တက်ပြီး လိုင်စင်ပါသိမ်းတဲ့အထိ ဖြစ်ဖူးပါကြောင်း…
စိတ်ဝင်စားရင် ရှာသာဖတ်… လင့်ခ်ထည့်ရင် မတ်စိမပေါ်လို့… အာ ဟိ
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ဒီအာလဖွားဂျီး
ဆိုလိုချင်​တာ ဆဲလ်​ဖီရိုက်​တဲ့စက္ကန့်​ပိုင်းနဲ့ မထိခိုက်​​စေဘူးလို့ သိ​စေချင်​တာပါ​ညော်​
ဟိုအာလဖွားဂျီး အ၀တ်​အစား​ပေါတာ သူ့နိုင်​ငံ​ရေးရပ်​တည်​ချက်​နဲ့ မဆိုင်​သလိုပဲ
ဆဲလ်​ဖီနဲ့ ​အေဗီ​ရေးယှင်း လားလားမှ မသက်​ဆိုင်​ P.s
မျိုးနဲ့ ​လေယာဉ်​​ပေါ်တက်​ ဆဲလ်​ဖီဆွဲရင်​​တော့ မီးဒုတ်​ရှို့ပါမည်​
ခင်ဇော် says: နာ့ ဂို အတော် စွဲလန်းး နေရှာဂိုးးးး
မြစပဲရိုး says: ရုပ်ဆောင်နေတဲ့ အပုတ်ကောင်လေး ….
မင်း ကို မဆုံးမ အားသေးဝူး။
အခု eurovision semi final မှာ ကွန်ကလေး လာနေရော့မယ်။
ကွန်ကလေး ရေ … အားပေးဖို့ မြ လာပြီ။
သွား …. ဒီ အပုတ်ကောင်လေး ဘေးဖယ်နေ။ :-))))
မြစပဲရိုး says: စိတ်ဝင်စားသူများ ဒီ ဆောင်းပါးလေး တွေ ကြိုဖတ်ထားပေါ့။
. နောက်ရက် မှာ သများ ပြောမှာကို ပြန် ပြောချင် ပြောဖို့ အချိန်ရအောင်လို့။
အရှေ့ ကို ကြိုပြီး တွေးတတ်တဲ့ တိုင်းပြည်များ မှာ ခေတ် စနစ် နည်းပညာ တွေ နဲ့လိုက်ပြီး လူတွေရဲ့ Health & Safety အတွက် ဘယ်လို စဉ်းစား တတ်တယ် ဆိုတာသိအောင်လို့ ပါ။
အတုယူလိုစိတ်ရှိလဲ ယူပေါ့။ အပို တွေ ဆိုလဲ ထားပြီး ပျော်သလို (တနည်း) ဖြစ်သလို နေကြပေါ့။
18 December 2014, 12.45am GMT
Last week, Quartz published an article showcasing photographs pilots have taken from the cockpit of aircraft to post on Instagram.
As explained in the story, by taking these photos – many of which appear to have been snapped during flight, take-off, or landing –
pilots are violating the rules of the air. This is certainly the case in the United States and the European Union, for example, but what about elsewhere?
The longstanding “sterile cockpit” rule requires pilots to refrain from non-essential activities during critical stages of flight,
including while the aircraft is involved in taxi, take-off and landing (and all other flight operations conducted below 10,000 feet, except cruise flight).
“Non-essential activities” include eating and engaging in conversation and reading publications not related to the operation of the aircraft.
It certainly covers cockpit selfies during landing. Alarmingly, as reported in Quartz, one #iger – or for those of us unfamiliar with the Instagram hashtag “Instagrammer” – posted:
Earlier this year, the United States Federal Aviation Administration further issued new regulations barring airline pilots from using electronic devices,
including laptops and mobile phones while on duty in the cockpit unless the purpose of using such devices is directly related to the operation of the aircraft or emergency, safety-related or employment related communications. These rules further restrict the ability for pilots to use these devices, placingacomplete ban on personal use of such devices while pilotingacommercial aircraft.
Again, this restriction certainly covers taking photos – even at cruising altitude.
There are similar regulations in the EU. The European Aviation Safety Agency’s Acceptable Means of Compliance and Guidance Material sets out that due to the higher risk of interference and potential for distracting crew from their duties,
portable electronic devices should not be used in the flight compartment, other than to assist the flight crew in their duties in certain circumstances.
Under Australian law,acommon law duty of care (an obligation owed to any person whom it is reasonably foreseeable would be injured by the lack of care of that person)
is owed by the pilot in command of an aircraft to persons including passengers and fellow crew members.
There appear to be no Australian laws or regulations which specifically prevent the taking of photographs by crew members of an aircraft.
It is clear that crew members can take photographs – of each other and the view outside the aircraft.
It is also clear, however, at common law and under statute that, depending on the operation of the aircraft and the circumstances –
and it all comes down to circumstance – the taking of such photographs may well be prohibited.
February 05, 2015 5:48 PM ET
Our next story’s about – you know what, waitasecond. Let me just takeaselfie first. Sound familiar?
You hear that phrase all the time from people addicted to posting pictures of themselves on social media. But whileadigital self-portrait might be fine at home or onanight out with friends, it is not OK in the cockpit ofaplane. In fact, the Federal Aviation Administration bans commercial airline pilots from using laptops, cell phones and other electronic devices while they’re on duty,
but that hasn’t stopped hundreds of dreamy cloud photos from popping up on Instagram and other networks. David Yanofsky from the online publication Quartz has written about this and speaks to us now.
CORNISH: So we mentioned selfies, but that’s not the only kind of photo you’re seeing, right? I mean, how prevalent is this?
YANOFSKY: Well, you know,acouple months ago I was on Instagram and I was noticing photos of all types. You’d see photos from pilots that are of sunsets, that are of mountains, that are of cityscapes – beautiful, beautiful photographs. And up until yesterday, there was no NTSB report that ever cited photographs being taken in the cockpit asareason foracrash.
CORNISH: So give us more on the specifics of the rules governing personal devices in the cockpit, right, the goal is what’s calledaquote-unquote “sterile cockpit.”
YANOFSKY: Sure. So sterile cockpit is what applies during taxi take-off and landing. And during those times pilots aren’t allowed to do any activity that is not directly related to the safe operation of the aircraft. That includes drinkingacup of coffee, that includes talking about the baseball game, that includes pointing out landmarks to the passengers in the back of the plane. But outside of critical phases of flight whereasterile cockpit is supposed to be observed, the FAA hasaregulation that was enacted in April 2014 that prevents all commercial airline pilots from using any electronic device that has wireless capabilities during flight.
YANOFSKY: It was taken in direct action, in fact, toacouple incidents and accidents caused by pilots either texting or using – in this specific example –alaptop computer. This wasaflight that missed its destination by like, 150 miles – just kept on flying.
YANOFSKY: It’s hard to say. There’s been no administrative action taken against any pilot for taking photographs in the cockpit, according to the FAA. I asked the FAA if they were going to publish any advisories and they said, nope, we’re going to take no extra action.
CORNISH: What’s been the response from pilots? Either ones you’ve contacted for this story, or just in response to the story itself, right, I mean they probably say they know best?
YANOFSKY: They definitely say they know best. They all say that they take the pictures, you know, when they’re allowed to. There are certain exceptions to the FAA rules, one of which being if the camera isafilm camera or doesn’t have wireless capabilities. And many pilots have contacted me inavery angry fashion for pointing out the possibly illegal activity.
YANOFSKY: You know, I’m pretty comfortable stepping onaplane. I flyalot. But the real concern with any industry isaculture of rule-breaking. And you don’t want to have any profession looking at the laws that govern them and saying, oh, this set of them doesn’t have to apply to me.
Wow says: ကိုယ်တွေလဲ တွေ့မရှောင်ထင်ရင်ထင်သလို ဆဲဖီထဆွဲတတ်သူမို့ ဟို နူးဘာဂိုဏ်းဘက်က နေရင်ကောင်းမားးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: . ဒေါ်ဝေါင်း၊ ဒေါ်ပုခ်ျ်၊ ဒေါ်ဇီ
ချစ်ချာလေး တွေ မြင်ရင် ငမ်းသာငမ်းပါလေ။
အပြစ်မရှိပါဘူး။ သများ သိုးဆောင်း တွေ ကို ဘူမှ ဆက်မပြောတော့လို့ သများ လဲ ရပ်ပါပြီ။
ကျောက်စ် ပြောတာ ရှာတော့ အဲ့ဒီသတင်း မထွက်လာဘဲ ဒီသတင်းဘဲ ထွက်လာတယ်။
ဘိဇနက် ကလပ်စ် က စီး တဲ့ မိန်းကလေး ချောချောလေး မို့ ခေသူတော့ ဟုတ်မယ် မထင်။
တော်လိုက်တဲ့ ကပ်ပတိန် ဟဲ့။ lol:-)))
Pilot lands in hot water… after inviting attractive Chinese passenger to sit next to him in the cockpit during the flight because the plane was full Ada Ng posted images from the flight on social networking site Weibo
Photos and cockpit selfie set tongues wagging over security concerns
28-year-old had sort of access which is much harder to get since 9/11
Was on return Cathay Pacific flight from Taipei to Hong Kong
Has since removed the pictures but they are continuing to circulate online By MailOnline Reporter